Mampiasa Latabatra sy Tabilao Fampirantiana ny Vavolombelon’i Jehovah
Tanzania: Olona liana rehefa nandalo teo amin’ny tabilao fampirantiana any Dar es-Salaam
MBOLA ny fitoriana isan-trano izao no fomba fitory lehibe indrindra ampiasaintsika, mba hampielezana ny vaovao tsara. (Mat. 24:14) Nampiasa latabatra sy talantalana ary kioska koa anefa ny mpitory mba hitoriana eny amin’ny toerana be olona. Ankoatr’izay, dia tabilao fampirantiana 250000 teo ho eo no efa voazara tany amin’ny fiangonana eran-tany. Inona ny vokany?
Nanomboka nanao an’io fandaharana io ny tany Tanzania tamin’ny 2014. Efa ho 700 izao ny olona nangataka hampianarina Baiboly tany Dar es-Salaam. Maro ny olona liana tonga mivory ary lasa mifandray amin’Andriamanitra. Tao anatin’ny herintaona, dia boky sy gazety ary taratasy mivalona 250 000 mahery no nalain’ny olona teny amin’ireny tabilao fampirantiana ireny. Olona avy eto Afrika na avy any ampitan-dranomasina no naka azy ireny.
Nosy 300 mahery no misy mponina any amin’ny Nosy Salomon, nefa tsy ampy 2 000 akory ny mpitory. Tena mandaitra àry ny fitoriana eny amin’ny toerana be olona mba hanelezana ny voan’ny fahamarinana. Nahapetraka gazety 104 000 mahery sy bokikely 23 600 mahery ireo rahalahy tao Honiara renivohitra. Avy amin’ireo nosy na toerana mitokana tsy misy Vavolombelona ny ankamaroan’ny olona nandray azy ireny. Indray tolakandro fotsiny, dia boky Ampianarina 400 no voapetraka ary olona 60 no nangataka hampianarina Baiboly.
Mpisava lalana any Venezoelà i Michael sy Linda. Nanao fampirantiana teo akaikin’ny torapasika iray tao amin’ny Nosy Margarita izy mivady, indray maraina. Nanatona teo ny lehilahy iray atao hoe Aníbal ary nandray boky Ampianarina. Nolazainy fa maty teo amin’io torapasika io ny rainy, fito taona lasa izay, ary kivy be foana ny reniny nanomboka tamin’izay. Niverina i Aníbal ny herinandro nanaraka. Nitsingerina tamin’io andro io, hono, ny daty nahafatesan’ny rainy. Navoakany ny findainy, dia nantsoiny ny reniny, ary nasainy nampahery azy i Michael. Niantso an’i Michael sy Linda imbetsaka ilay ramatoa taorian’izay, ka afaka nanome andinin-teny nampahery azy izy mivady. Nandefa hafatra an-telefaonina ilay ramatoa, indray mandeha, hoe: “Tsy dia malahelo intsony aho androany, satria nampahery ahy ianareo sady nampitombo ny finoako.”
Ary manao ahoana ny any Etazonia? Toerana 127, any amin’ny tanàn-dehibe 14, no anaovana fitoriana eny amin’ny toerana be olona. Fampianarana Baiboly 8 445 no natomboka, nandritra ny fito volana voalohany tamin’ny taom-panompoana 2015. Nahazo fanampiana koa ny olona maro tsy nitory intsony, noho io fomba fitory vaovao io. Anisan’izany ny lehilahy iray atao hoe Terry. Nijerijery teo amin’ny latabatra fampirantiana iray izy, tany Los Angeles, any Kalifornia. Nanontany azy ilay mpivady teo raha efa namaky ny bokintsika izy taloha. Hay, hono, izy Vavolombelon’i Jehovah, fa efa efa-taona teo ho eo izy no tsy nitory intsony. Novakin’izy mivady taminy ny Ezekiela 34:11. Hoy i Jehovah ao: “Izaho mihitsy no hitady ny ondriko sy hikarakara azy.” Niarahan’izy ireo nidinika ilay izy avy eo. Noresahin’izy mivady taminy koa ny tranonkalantsika sy ny tele JW. Nandefa e-mail tamin’izy mivady i Terry ny ampitson’iny, ary nilaza fa vao avy nivavaka mihitsy, hono, izy talohan’ny nahitany an’ilay latabatra fampirantiana. Nangata-pamelana tamin’Andriamanitra izy satria nanao tsirambina ny fivoriana. Nangataka fanampiana koa, hono, izy mba ho afaka hifandray akaiky amin’i Jehovah indray. Hoy izy avy eo: “Dia tamin’izay ianareo no niarahaba ahy sady tsara fanahy tamiko. Namaky andinin-teny mampahery ianareo, sady nanome fanazavana nanampy ahy hiverina amin’ny fandaminana indray. Tena valim-bavaka izany.”
Toerana efatra no anaovana fitoriana eny amin’ny toerana be olona any Addis-Abeba, any Etiopia. Nahapetraka boky sy gazety ary taratasy mivalona 37 275 ireo rahalahy tao anatin’ny telo volana. Olona 629 koa no nangataka hotsidihina. Nandray boky Ampianarina, ohatra, ny lehilahy zokiolona iray ary tonga dia novakiny ilay izy. Efa nianatra tany amin’ny sekoly fiofanana ho pretra izy taloha, ary betsaka ny fanontaniany momba an’i Jesosy sy ny Fanjakan’Andriamanitra. Niverina indray àry izy ny ampitso mba hanontany an’ireo rahalahy. Nanaiky hianatra Baiboly izy ny ampitson’io, ary nanatrika fivoriana voalohany tamin’ny faran’iny herinandro iny. Mivory tsy tapaka izy izao, ary efa mandroso tsara.
Etiopia: Boky amin’ny teny amharique atao fampirantiana any Addis-Abeba
Nanatona talantalana fampirantiana ny lehilahy jiosy iray tany Meksika, ary nanontany raha manana boky miresaka momba ny maty ireo rahalahy roa teo. Nilaza izy ireo fa efa lany ilay gazety miresaka momba ny maty, ka gazety miresaka momba ny hoavy no natolony azy. Notazonin’ilay rangahy ny tanan’ilay rahalahy sady hoy izy: “Tsy mahaliana ahy izany hoavy izany, fa izaho aza te hamono tena.” Dia nanomboka nitomany izy. Hay maty vao haingana ny zanany lahy. Nasehon’izy roa lahy azy àry ny toko faha-7 amin’ny boky Ampianarina. Novakin’izy ireo taminy ny fehintsoratra roa voalohany, teo ambanin’ilay lohatenikely hoe “Rehefa misy havana maty” sy ny faran’ilay toko, izay manazava ny fanantenana ho an’ireo maty. Nanohina ny fony izany, ka notazoniny indray ny tanan’ilay rahalahy sady hoy izy: “Tena marina ve izany?” Nilaza taminy ireo rahalahy fa tena hanatanteraka ny fampanantenany i Jehovah. Hoy indray izy: “Inona no tokony hataoko mba hahitako ny zanako indray?” Dia nifanao fotoana ry zareo mba hitsidihana azy any an-tranony. Hitan’ireo rahalahy hoe efa niandry azy ireo izy sady vonona hianatra.
Hoy ny mpiandraikitra mpitety faritany iray any New York : “Tena notahin’i Jehovah io fandaharana io. Tsy vitan’ny hoe olona an’aliny no lasa mandre ny vaovao tsara, fa na ny tsy mitory intsony sy ny voaroaka aza mba mandray soa koa. Mahazo fanampiana izao ireny ‘ondry very’ ireny mba hiverina ao amin’ny andian’ondry indray.”—Ezek. 34:15, 16.
Video: Tsy Ariny Ilay Izy!
Tabilao Fampirantiana Miisa 165 000 Mahery!